Khasaaraha ka dhashay qaraxii shakay muqdisho ka dhacay oo sii kordhay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
October 15(FMN)-Qasaaraha ka dhashay qaraxii weynaa ee shalay galab ka dhacay agagaarka zope ee magaalada muqdisho aya marba marka kadanbaysa isasoo taraya iyada oo ilaa iyo haatan inta la hubo dhimashadu ay kor dhaafayso 200 qof,halka dhaawacuna uu gaadhayo boqolaal.Qaraxa oo ahaay mid aad uculus loona adeegsaday gaadhi nooca xamuulka qaada ah ayaa saameeyay dhismayaal balaadhan oo ku teedsan wadada is goyska Km5 taas oo keentay in dhismayaashaasi ay bur-buraan.
Dhismayasha bur-buray ayaa waxaa ku sugnaay dad aad ufara badan oo ilaa iyo haatan lagasoo qufayo bur-burka dhismayaasha hoostooda.Maydadka ayaa ah kuwa muuqaalkooda doorsoomay ayna adagtahay in la aqoonsado.Baraha bulshadu kuwada xidhiidho ayaa lagu faafinayaa sawirada iyo magacyada dadka qaraxaasi ku waxyeeloobay oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.In badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa la la’yahay dad u ehel ah oo aqoonsada.
Dadbadan oo shacab iyo madaxba isugu jira ayaa tagaya goobaha dadkaasi lagu dabiibayo iyo halkii uu qaraxa ka dhacay si ay xaalada usoo arkaan,iyadoo qaarkoodna ay dhiigooda ku deeqayaan.Dadka ayaa ah kuwa aad u argagaxsan oo ay ka muuqato diifta iyo murugada ka dhalatay musiibadaasi qaran ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho.Sidoo kale Ehelada dadka la la’yahay ayaa buux dhaafiyay goobaha caafimaadka iyo dhismayaashii ku bur-buray qaraxii shalay iyaga oo quud daraynaya in ay helaan dadkoodii raq iyo ruux mid un.
Previous Previous post: Ra’iisul Wasaaraha oo ka baaqday booqasho rasmi ah oo uu ku tagi lahaa Dalka Turkiga.
Next Next post: DFS oo Samaysay Xarun loogu talo galay Gar-gaarka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii shalay.